Outdoor Projection Lights LED မှအကောင်းဆုံး Outdoor Projection Lights LED မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHINYU LIGHT CO., LTD. အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့သည် Taiwan Outdoor Projection Lights LED ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံတွင် Hi-tech ကိုစက်ပစ္စည်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အလွန်နောက်ဆုံးပေါ်ထည့်သွင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပေါ်တိုးတက်စေရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖောက်သည်များကမျှော်လင့်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုစံချိန်စံညွှန်းထက်ကျော်လွန်ကြောင်းအာမခံရောက်နေပါတယ်။ Customer များအဆန်းသစ်ဆုံးနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်လက်ခံရရှိစိတ်ချကြသည်။ ရန် hesitance မ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု။
ပုံစံ - 80-150W
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်းများကိုကျယ်ပြန့်သည့်အပြင်ဘက်အလင်းရောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်.မြင့်မားသောတောက်ပသော led နှင့်အတူ,ကျယ်ပြန့်သောအလင်းထောင့်,အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်နာရီပေါင်း ၅၀၀၀၀ သက်တမ်းရှိသည်.
ကောင်းသောအကြိုက်မျက်နှာပြင် finish ကိုကုသမှုနှင့်၎င်း၏ဆန့်ကျင်-ဖုန်မှုန့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/outdoor-projection-led-lights.html
အကောင်းဆုံး Outdoor Projection Lights LED ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Outdoor Projection Lights LED ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊